Fitoriana: Ahoana no manoratra ny fitarainana - Alemaina mpisolovava an-tserasera. Ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
Fitoriana: Ahoana no manoratra ny fitarainana
Ny fitarainana dia milaza ny Ny mpanjifa dia mety ho nitarika ny mpivarotra na ny Fanondranana ny asa fanompoanaAzo atao, ohatra, ny lisitry ny Kilema, ny nividy vokatra, ny fitoriana ny diany, ny fahadisoana eo amin'ny faktiora, sns. Ao amin'ny voalohany, dia tsy maintsy manazava ny antony, ohatra: ny nividy entana, miasa tsara, na dia tapaka.
Ny andininy faharoa dia ny fangatahana ho an'ny valin, fifanakalozana na fanamboarana ny entana, re-fanatanterahana ny asa fanompoana, sns.
amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, io andinin-tsoratra mifarana amin'ny ny didim-pitsarana, fa ny raharaha maika sy ny zava-dehibe, ary ny addressee dia tsy maintsy manome fahafaham-po ny fitakiana. Ny fitarainana mety ho hatsaran'ny na ny hamaroan'isa Ny olona iray izay manaiky ny entana, ny vatan-kazo ny fandraisana sy ny amin'ny raharaha raha manao fahadisoana (na ny hatsaran'ny hamaroan'isa), ny hazo hafa no namorona, izay manompo ho toy ny fanamarinana ny fitarainana.
Any amin'ny manana ny Fijaliana aho mizara, fa ny Entana natolotra anao, Efa nanome baiko ireo nanao diso.
Rehefa afaka andro ny fampiasana tsikaritro fa izaho mangataka vola refund na fifanakalozana. Miangavy ny raharaha maika Taorian'ny fahavitan'ny fanavaozana ny hoso-doko ny atrikasa ary ny famolavolana ny ny vokatra amin'ny namoaka invoice aho, dia nahatsikaritra roa inaccuracies: izaho mangataka ny rapid response (hatramin'ny.
Mety, noho ny fiombonana), ny fanitsiana ireo tsy marina sy ny vanim-potoana ny fotoana, raha izy ireo dia ho vita.
Izay mandoa ny vola lany tamin'ny fotoana nametrahana ny fisaraham-panambadiana. Ny fisaraham-panambadiana ny vola lany
Vlucht annuleren - geld voor de vlucht